Rafitra RF EAS
AM mafy tenifototra
Ronono tavoahangy Tag
Wine tavoahangy Tag
Izay tianao, dia afaka ampanjifaina matetika, Logo, ny lokony, endrika
Sarotra ny mahita mety manohitra ny halatra entana vahaolana ho an'ny sasany indraindray. Yasen faly ny tolotra famolavolana vahaolana ho an'ireo entana maimaim-poana, araka ny mpanjifa 'fepetra.
Yasen specializes amin'ny R & D, mamokatra sy ny varotra EAS vokatra. Yasen manana EAS feno vokatra isan-karazany: RF / AM mafy tenifototra, RF / AM marika, EAS RF / AM rafitra fiarovana, EAS detacher sns
Applications ahitana herinaratra fitaovana, lamba, kiraro sy ny toeram-pivarotana lehibe. Ny vokatra dia malaza ao an-toerana sy avy any ivelany tsena.
Yasen dia nahatratra ISO9001 taratasy, taona SGS taratasy sy taratasy fanamarinana ho an'ny EAS rafitra. A be ny vokatra sy ny teknolojia ihany koa ny hahazo fiarovana patanty.
Hatramin'ny taona 2001
Professional sy ny hafanam-po R & D ekipa mahatonga Yasen mba hanampy ny mpanjifa ny lamaody amin'ny famolavolana sy azo ampiharina. 10 vokatra andalana niaraka feno am-boalohany napetraka ny trano famokarana, ny fitaovana sy ny fitaovana mizaha toetra mahatonga Yasen mba hanome vokatra azo antoka tsara sy tia mifaninana vidiny ho an'ny mpanjifa ara-potoana.
Yasen afaka mamokatra 100 tapitrisa sekely EAS Tags sy ny 800 tapitrisa tapa-AM etikety isan-taona.
Ny entana rehetra dia vokarina ka naka fanahy hentitra araka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny firenena.
Inona no Clients Lazao?
Izahay efa teto Yasen nandritra ny 2 taona, ary izy ireo ho mamirapiratra amin'ny mikarakara ny raharaham-barotra. Amin'ny vidiny fanatitra sy ny mpanjifa ho tsara, ny fanaovana ny asa mahomby kokoa. --- Titan Thompson
Yasen ny vokatra malefaka no nanampy antsika hitandrina ny fifehezana feno ny fividianana raha mitoetra fampihenana ny vola lany. Yasen nanampy anay ihany koa mametraka rafitra fanairana EAS an-toerana. --- Joy Jansen
Efa Tena mahafinaritra ny hiara-miasa amin'ny Yasen Co. ny fahatsoram any am-piasana sy ny matihanina ny kalitaon'ny vokatra no tena mampiavaka ny orinasa. Te hanitatra ny fankasitrahana ireo ekipa Yasen lehibe noho ny fanohanana nandritra ny taona maro isika dia nanana fahafahana hiara-miasa amin'izy ireo. ------- Amari Wilder
Great fiaraha-miasa amin'ny Yasen indrindra fa ny fisakaizana amin'izao Ben. Ben tena tsara lehilahy; tsy maintsy manana ny fiaraha-miasa bebe kokoa ------ Jamie Smith
andriamby Key Detacher , Security Detacher Cap , Optical Tag Detacher , Glass Tag Detacher , Eas Glass Tag Detacher , Mini Eas Detacher ,